Art is My Life: တရုပ်တွေ ဘာကြောင့်ချမ်းသာ ကြသလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:42 PM
တရုတ်စက် ဆိုရင်တော့ ရှောင်ရတယ်။ တစ်ရက်နဲ့ စုတ်တတ်လို့ ။(ဖွတာမဟုတ်ဘူးနော်)
အို.... သုံးသာ သုံး။ သေရင် ကိုယ့်နောက်ပါတာ မဟုတ်ဘူး။ မသုံးရ မစားရ ရန်သူမျိုးငါးပါးကြောင့် ကုန်သွားရင် ရင်ခံနေရမယ်။ သေရင် ကိုယ့်နောက်ပါဖို့လဲ လုပ်၊ မသေခင်လည်း အဖြုန်း အရမ်းမကြီးရင်တောင် နည်းနည်းတော့ ဖြုန်းပေးရတယ်။ ဒါမှ တိုင်းပြည်ရဲ့ ၀င်ငွေ လည်ပတ်စီးဆင်းမှုလည်း ကောင်းမှာ။ ပိုက်ဆံတွေ မှိုတက်သွားရင် နှမြောစရာ။ :D
တီရုပ်တွေကို မီကောင်းတာ မီရေးနဲ့နော်။ ၀ အားကီး စိတ်ဆိုးလယ်။ ၀တို့က ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားလယ်။ တီရုပ်လိုရှာ ကီလားလိုစု ပီမာလို မီဖြုန်းနဲ့ ဆိုဒါ မီကြားဖူးဘူးလား။
ဆက်ရေးပါဗျ ... ဒါမှ ပို မြင် လာကြမှာ ... မသိကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ... မကျင့် နိုင်ကြတာ :)
ရှိပူရသေး ကုန်မှအေး တဲ့ မကြားဖူးဘူးလား
မရှိလို. မစား မစားလို. မရှိ အဲ.. ဆိုင်ဘူးနော် ။
စား ချင် လို. စား သော ။ သုံးချင် ၍ သုံး သော ဗမာ လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကုလား ။. တရုတ် ဘယ်လို လူမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကျေနပ် တာလုပ် လိုက် ရလို. ကျေနပ်မူတခုတော. ရမှာ သေချာပါတယ် ။
ကျွန်တော့် အမြင်လေးပါ... တရုတ်တွေ ချမ်းသာတာ ရှာဖွေတတ်လို့လဲ ပါပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် စုဆောင်းတတ်တာလဲ ပါပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာကို ၀ယ်စုထားသင့်သလဲကို ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်နဲ့ လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ သူများတကာတွေ ပိုက်ဆံကို ကျစ်နေအောင် စုနေချိန်မှာ တရုတ်က ရွှေတွေ ၀ယ်ထားပါမယ်။ သူများတကာတွေ ရွှေတွေ စုနေချိန်မှာ တရုတ်က ရွှေတွေ ထုတ်ရောင်းပြီး ခြံတွေ မြေတွေ ကားတွေ တိုက်ခန်းတွေ ၀ယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို အမြတ်ရတာနဲ့ ရောင်းထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ လက်ထဲမှာရှိတဲ့ ငွေကို တိုးပွါးအောင် လုပ်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက စုဆောင်းပုံလေးက စည်းကမ်းကြီးတဲ့ တရုတ်မိသားစုမှာ မုန့်ဖိုးက အစ သတ်မှတ်ပြီး ပေးပါတယ်။ ပေးတဲ့အခါကျရင်လည်း ၁ လ လုံးစာကို ပေးထားနိုင်ပေမယ့် ၁ ရက်စီကိုပဲ ပေးကြပါတယ်။ ပိုက်ဆံသုံးတာ စည်းကမ်းရှိကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ စည်းကမ်းရှိတာနဲ့ ကပ်စေးနဲတာ မတူဘူး ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
တရုတ်လူမျိုးတိုင်း ကပ်စေးနဲတယ်လို့ ပြောလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါဆို ကောက်ချက်ချတာ မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရှင်သန် ကြီးထွားလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အလွန် အရေးပါ ပါတယ်။ ရက်ရောတဲ့ ဗမာမိသားစုတွေ များတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ တရုတ်တချို့ကတော့ ကပ်စေးနဲတာ သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသုံးအစွဲ ကျစ်လစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာ မလိုအပ်ရင် မသုံးကြပါဘူး။ မဖြုန်းကြပါဘူး။
အခု ရေးထားတဲ့ပို့စ်က တရုတ်သူဌေးသားကတော့ ကပ်စေးနဲတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ သူ သုံးဖို့စွဲဖို့ပဲ ကြည့်တတ်တာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကလပ်တက်ဖို့ ပိုက်ဆံရှိပြီး ရေ၀ယ်သောက်ဖို့ ပိုက်ဆံ မရှိတာ အလွန်ကို ရီစရာ ကောင်းလှတဲ့ ကပ်စေးနဲချက်ပါ။
ဒါကြောင့် အဲဒီ သူဌေးသားကို တကိုယ်ကောင်း ဆန်တဲ့ တရုတ်လို့ပဲ ကျွန်တော် (တရုတ်လူမျိုး ၁၀၀% စစ်စစ်) က ပြောချင်ပါတော့တယ်။
hmmmm... Don't say about chinese from myanmar. Most of the chinese from other country are rich too... cause they are not lazy, hard-working and know how to do business depend on the situation. In Indonesia, indo people hate chinesealot because most of the business there are own by Chinese people there. If the blogger say that chinese people are stingy, then there is no place for indian already. Chinese people earn money well and spend money well depend on the situation as well. except for some stingy chinese...